ZONER ဓာတ်ပုံစတူဒီယို 19.1803.2.60 အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Zoner ဓာတ်ပုံစတူဒီယို 19.1803.2.60
DB format နဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုသာသူတို့မူလကဖန်တီးခဲ့ကြသည်ရှိရာအဲဒီပရိုဂရမ်အတွက်ဖွင့်လှစ်နိုင်မယ့်ဒေတာဘေ့စဖိုင်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကြှနျုပျတို့သညျဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အပါဆုံးသင့်လျော်သောအစီအစဉ်များကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
ဖိုင်ကို DB ဖွင့်လှစ်
Windows ကိုတွင်, သင်မကြာခဏအများဆုံးကိစ္စများတွင်ပုံရိပ်တွေ့ cache ကိုဖြစ်ကြသည်သော DB ၏ချဲ့ထွင်မှုနှင့်အတူစာရွက်စာတမ်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့အဖွင့်ဤဖိုင်တွေနဲ့နည်းလမ်းများအကြောင်းကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးအတွက်ကိုပြောသည်နေကြသည်။
အသေးစိတ်: Thumbs.db Thumbnail File
များစွာသောအစီအစဉ်များကိုတစ်ဦးတည်းပိုင်ဒေတာဘေ့စဖိုင်တွေဖန်တီးကတည်းကကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းကိစ္စထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းများတန်ဖိုးများနှင့်အတူစားပွဲနှင့်လယ်ယာအစုတခုင်, ချဲ့ထွင်စာရွက်စာတမ်းများ DB နှင့်အတူအဖွင့်ရန်ညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။
Method ကို 1: dBASE
DBASE software ကိုငါတို့ရှေ့မှာဖိုင်အမျိုးအစားထောက်ခံပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း databases ကို၏များစွာသောအခြားမျိုးသာ။ Software ကိုသငျသညျ၏ရှေ့အလုပ်လုပ်တဲ့န့်အသတ်မဖြစ်လတံ့သောကာလအတွင်း 30 ရက်ကြာစမ်းသပ်ကာလအနေဖြင့်တစ်ဦးအခကြေးငွေများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ dBASE ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပြမှုစာမျက်နှာ Links များ၏ကနဦးအရင်းအမြစ်နှင့်အတူ installation ဖိုင် Download လုပ်နှင့်သင့် PC မှာ install လုပ်ထားတဲ့ပရိုဂရမ်ကို run ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌ dBASE PLUS ဗားရှင်း 12 ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
Desktop ပေါ်မှာ program ကိုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါဒါမှမဟုတ်အမြစ် directory ကိုရဲ့ start-up, run ။
, က start-up, စဉ်အတွင်းစမ်းဗားရှင်းကိုအသုံးပြုဖို့ရွေးဖို့ "dBASE PLUS 12 ကိုအကဲ".
မီနူးကိုဖွင့် "File" နှင့်ပစ္စည်းကိုသုံးပါ "ပွင့်လင်း".
စာရင်းကတဆင့် "အမျိုးအစား၏ဖိုင်များ" extension ကို select လုပ်ပါ "ဇယား (* .dbf; * DB ။ )".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: DBF ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကွန်ပျူတာတွင်, တည်နေရာ, ပြီးတော့တူညီတဲ့ဝင်းဒိုးကိုသုံးပြီး document ကိုဖွင့်လှစ်။
ထို့နောက် DB အောင်မြင်စွာဖိုင်ကိုဖွင့်ပါတဲ့ဝင်းဒိုးအစီအစဉ်၏ Workspace ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်ပုံရိပ်တခါတရံပြဿနာဖော်ပြရန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာကွာခဏကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်နှင့်အသုံးပြုမှု dBASE ဆီးတားမထားဘူး။
Method ကို 2: WordPerfect Office ကို
အဆိုပါဒေတာဘေ့စ file ကိုဖွင့်ပါကသင်သည်ကုမ္ပဏီ Corel ကနေ default အနေနဲ့ရုံး suite ကို WordPerfect Office ကိုတွင်ထည့်သွင်း Quattro Pro ကို software ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲအခမဲ့သည်မဟုတ်, တချို့ကန့်သတ်နှင့်အတူအခမဲ့အစမ်းကာလနှင့်အတူ။
အဆိုပါ WordPerfect ရုံး၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်
ကွန်ပျူတာထဲမှာ software ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျလုံးဝ software ကို install လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသတိရ, ဤအထူးသဖြင့်စစ်မှန်တဲ့ Quattro Pro ကို component တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Quattro Pro ကို"လိုချင်သော application ကိုဖွင့်လှစ်ရန်။ ဤသည်ပြုပြင်သည် directory မှ၎င်း, desktop ပေါ်မှာကနေနှစ်ဦးစလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အထက် pane ထဲကရက်နေ့တွင်စာရင်းတိုးချဲ့ "File" နှင့်ကို select "ပွင့်လင်း"
ဒါမှမဟုတ် toolbar ကိုအပေါ်တစ်ဦး folder ထဲမှာအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထဲမှာ "ပွင့်လင်းဖိုင်မှတ်တမ်း" လိုင်းပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "File name ကို" နှင့် extension ကို select လုပ်ပါ "Paradox v7 / V8 / v9 / v10 (* ။ DB)"
အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖိုင်ကို၏တည်နေရာဒေတာကိုသွားပြီး, ကရွေးပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
ကုသမှု table ၏တိုတောင်းသောအဆုံးတွင်ပွင့်လင်းဖိုင်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဖတ်နေစဉ်တွင်ပုံပျက်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာအမှားဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
အလားတူ program ကိုသငျသညျ DB format နဲ့စားပွဲကယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့လိုအပ်သောပြင်ဆင်ရန်အတွက် DB ဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဆိုပါကမည်သို့ထွက်တွက်ဆနိုင်ခဲ့ကြတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။